ch 18 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 18 လုကာ
18:1 အခုတော့သူလည်းသူတို့ကိုတစ်ဦးကပြောသည်ဥပမာအနကျအဓိပ်ပါယျ, ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းပဌနာသည်ငြိမ်းနှင့်မသင့်ကြောင်း,
18:2 ဟုဆို: "တယောမွို့တျောတှငျအခြို့တရားသူကြီးရှိ၏, ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ဘူးနှင့်လူမလေးစားခဲ့ဘူးတဲ့သူ.
18:3 သို့သော်ထိုမွို့၌အခြို့သောမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိ၏, သူမကထံတော်သို့သွားလေ၏, ဟုဆို, 'ငါ့ရန်ဘက်ပြုသောအထဲကငါ့ကိုနောင်တ။ ' '
18:4 သူအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤမျှပြုပါရန်ငြင်းဆန်. ဒါပေမယ့်နောက်မှ, သူသညျမိမိအတွင်းကပြောကြားခဲ့သည်: '' ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါဘူးတောင်မှ, မဟုတ်သလိုရိုသေလေးစားမှု, လူ,
18:5 သို့သျောလညျးဤမုတ်ဆိုးမသည်ငါ့ကို pestering ကြောင့်, ငါသူမ၏နောင်တလိမ့်မည်, ပြည်တော်ပြန်များက စိုးရိမ်., သူမ may, အဆုံးသတ်မှာ, ငါ့ကိုအထွက်ကိုဝတ်ဆင်။ "
18:6 ထိုအခါထာဝရဘုရားမိနျ့တျောမူ: "ဒီမတရားတဲ့တရားသူကြီးဟုဆိုသည်ဘာကိုမှ Listen.
18:7 သို့ဖြစ်., ဘုရားသခင်သည်မိမိရွေးချယ်သောသူတို့ကို၏ဖြောင့်မတ်ပေးသနားတော်မူမည်မဟုတ်, သူ့ကိုနေ့နှင့်ညဉ့်ကိုအော်ဟစ်သောသူထွက်? သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုသည်းခံရ၏မှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်?
18:8 ငါကသူကိုအလျင်အမြန်သူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်အကြောင်းဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အားကြားပြော. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, လာသောအခါလူကိုပြန်၏သားတော်ကို, သငျသညျမွကွေီးပျေါယုံကွညျခွငျးကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုထင်ပြုမည်?"
18:13 And the tax collector, standing atadistance, was not willing to even lift up his eyes to heaven. But he struck his chest, ဟုဆို: ‘O God, ငါ့ကိုမသနားတျောမူဖြစ်,asinner.’
18:14 ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, this one descended to his house justified, but not the other. For everyone who exalts himself will be humbled; and whoever humbles himself will be exalted.”
18:15 And they were bringing little children to him, သူသည်သူတို့ကိုမထိစေခြင်းငှါဤမျှ. And when the disciples saw this, they rebuked them.
18:16 သို့သျောယရှေု, calling them together, ကပြောပါတယ်: “Allow the children to come to me, and do not be an obstacle to them. For of such is the kingdom of God.
18:17 အာမင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, whoever will not accept the kingdom of God likeachild, ဒါကြောင့်ထဲသို့မဝင်ရမည်မဟုတ်။ "
18:18 Andacertain leader questioned him, ဟုဆို: “Good teacher, what should I do to possess eternal life?"
18:19 ထိုအခါယရှေုကလညျး: “Why do you call me good? No one is good except God alone.
18:20 You know the commandments: သငျသညျမသတ်ရကြမည်. သငျသညျမျောက်လိမ့်မည်မဟုတ်. သငျသညျမခိုးရကြလိမ့်မည်. You shall not give false testimony. သင်၏အဘနှင့်မိခင်ရိုသေစွာပြုလော့။ "
18:21 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “I have kept all these things from my youth.”
18:22 And when Jesus heard this, သူ့ကိုအားဆို၏: “One thing is still lacking for you. Sell all the things that you have, နှင့်ဆင်းရဲသောအားပေးမည်ဟု. And then you will have treasure in heaven. လာ, ကိုယ့်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ။"
18:24 ထိုအခါယေရှုသည်, seeing him brought to sorrow, ကပြောပါတယ်: “How difficult it is for those who have money to enter into the kingdom of God!
18:27 သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, “Things that are impossible with men are possible with God.”
18:28 And Peter said, "အကယ်, we have left everything, and we have followed you.”
18:29 ထိုသူတို့အားဆို၏: "အာမင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, there is no one who has left behind home, or parents, သို့မဟုတ်ကညီအစ်ကိုတွေ, orawife, သို့မဟုတ်ကလေးများ, for the sake of the kingdom of God,
18:31 Then Jesus took the twelve aside, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "အကယ်, we are ascending to Jerusalem, and everything shall be completed which was written by the prophets about the Son of man.
18:33 And after they have scourged him, they will kill him. ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌, သူသည်နောက်တဖန်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ "
18:35 အခုတော့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သူသည်ယေရိခေါချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, တယောလူကန်းသည်လမ်းအနားမှာထိုင်, တောင်းစား.
18:36 ထိုမင်းသည်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းလူအစုအဝေးကွားသောအခါ, သူသည်ဤဘယျဟုမေး.
18:38 ထိုမင်းသည်ဟစ်ကြော်, ဟုဆို, "ယေရှု, ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်သည်, အကြှနျုပျကိုသနားယူ!"
18:39 ထိုအနေဖြင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေကသူ့ကိုဆုံးမတော်မူ, သူတိတ်ဆိတ်စွာနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူအပေါငျးတို့သ သာ. ဟစျကျွော, ဒါဝိဒ်၏ "သားတော်, အကြှနျုပျကိုသနားယူ!"
18:40 ထိုအခါယေရှုသည်, နေဆဲရပ်နေ, တျောသို့ဆောငျခံရဖို့အမိန့်ထုတ်သူ့ကို. ထိုမင်းသည်ချဉ်းကပ်ပြီးမှ,, သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်,
18:41 ဟုဆို, "သင်ဘာလိုချင်ပါသလဲ, ငါသည်သင်တို့အဘို့ပြုအံ့သောငှါ?"ဒီတော့သူကပြောသည်, "သခင်, ငါမြင်စေခြင်းငှါ။ "
18:42 ထိုအယရှေုကလညျး: "ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ပါ. သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့၏။ "
18:43 ထိုခဏသူကိုမြင်လျှင်. သူသည်နောက်တော်သို့လိုက်, ဘုရားသခင့ခြီးမှမျးသ. လူအပေါင်းတို့နှင့်, သူတို့ကဒီကိုမြင်သောအခါ, ဘုရားသခင့ချီးမွမ်း.